ပန်ဒိုရာ: Happy New Year 2009!
happy new year. i am number 2
It will come here 8 hours later ;P
နှစ်သစ်မှာ ပန်ဒိုရာတယောက် ရေလိုလန်းလို့ ပန်းလိုမွှေးပါစေ။ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ ပါစေသတည်း။ (မြန်မာပြည်က အိမ်ဝမှာ လာရပ်တတ်တဲ့ အလှူခံကို ပြေးသတိမရနဲ့ဦးဗျိုး။)
happy new year. i am number5း)
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မင်္ဂလာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဗျာ... :)
no.lucky.007 အန်တီပန်ရေ ပျော်ရွှင်မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါ..။
အရုပ်လေးတွေက ချစ်စရာလေး ပန်ပန်။
ပုံထဲကလို အမြဲပြုံးရွှင်နိုင်တဲ့ နှစ်သစ် မင်္ဂလာ..ပါ ပန်ပန်ရေ။
မင်္ဂလာနှစ်သစ် ပျော်ရွှင်နှစ်သစ် ၂၀၀၉...
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ
Happy New Year ပါ မပန်ရေ။
Happy and Prosperous New Year 2009!
အသစ်အသစ်တွေနဲ့ကောင်းမြတ်သောနှစ်တနှစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကြီးပွား၊ တိုးတက်၊ အောင်မြင်ပါစေ
လှပ၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ .. .. လို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်
မပန်ရေ.. ပုံလေးတွေ ဆွဲထားတာ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်... မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ.. :)
1 Jan 09, 13:27
kom: happy new year
1 Jan 09, 12:33
Just me: Happy New Year. Forever happy par say
1 Jan 09, 12:21
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ: မပန်ဒိုရာ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါခင်ဗျာ
1 Jan 09, 10:26
Alvin: နှစ်သစ်ကူး မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ
1 Jan 09, 10:18
စိုင်းခမ်းထွန်း: 2009 2009 2009 2009 2009
1 Jan 09, 09:09
အောင်သာငယ်: ၂၀၀၉ ရဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်းကို အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ မပန်ရေ့...
1 Jan 09, 06:24
1 Jan 09, 05:08
byakga: hey, welcome back. wishing youahappy new year.
1 Jan 09, 01:44
YoungGun: အဲလို ကလေးလက်ရာစတိုင်လေးနဲ့ 2009 ကိုမြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲ ဖြူဆွတ်သွားတာပဲဗျာ လာသွားတယ် နှစ်သစ်မှာ ပျော်စရာရောဝမ်းနည်းစရာပါ ကြုံတွေ့ပါစေဗျား မျှမျှတတပေါ့နော။
1 Jan 09, 01:16
စိုးသင့်ဆွေ: နှစ်သစ်မှသည်.. ရွှင်သောစိတ်လန်းသောကိုယ်နှင့် စာကောင်းကဗျာကောင်းတွေ များများရေးနိုင်ပါစေ မပန်ဒိုရာ...။
ကိုအောင်: Happy New Year 2009
31 Dec 08, 22:24
မြတ်နိုး: Happy new year 2009!!!
31 Dec 08, 22:15
31 Dec 08, 22:02
ငွေအိမ်စံ: (¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯) ¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸ ♥Happy New Year!2009 Ma Ma.¸¸¤°´'` (_¸.•*´'`°¤¸'¸¤°´'`*•.¸_)
31 Dec 08, 21:39
မာန်လှိုင်းငယ်: မပန်ရေ... နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုနေ့ရက်တွေ ရှိနေပါစေဗျာ
31 Dec 08, 19:38
မင်းယွန်း: အန်တီပန်ရေ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ ခင်ဗျာ...။
Happy New Year မပန်
1 Jan 09, 22:21
ဂင်ကြီး: ညီမရေ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ
1 Jan 09, 21:18
ayemin: လာလည်သွားပါတယ်။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။
1 Jan 09, 21:01
M.Y: Wishing youavery Happy New Year 2009.
1 Jan 09, 19:29
jasmine: happy new year
1 Jan 09, 19:04
အိမ်လွမ်းသူ: နှစ်သစ်မှာ မိသားစုအားလုံး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ..
1 Jan 09, 19:02
ကိုရုပ်ဆိုး: ပျော်ရွှင်ဇွယ်နှစ်ကလေးဖြစ်ပါစေဗျာ ....။ အခု ကျနော်က လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေ ထွက်မလို့ ညည်းထားတာဗျ။
1 Jan 09, 18:44
icn2: ပျော်ရွှင်ပါစေ မပန်ဒိုရေ
1 Jan 09, 17:48
yeyintthetzwe: ၂၀၀၉ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ကျနော်တို့ ရေစုန်မျောကြမှာလား၊ရေဆန်တက်ကြမှာလား၊တိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေ။ဟက်ပီးနယူးရီးယား။
happy new year ahead .. :P
မမပန်. အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ..
ကိုဖြိုး: ကျွန်တော်လည်း ဘောလုံးတွေ တွေ့တာပဲဗျ ... ဒါပေမယ့် မှောင်ကြီးမည်းကြီးရယ်နဲ့ ... ဟားဟား ... အန်တီပန် မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ...
2 Jan 09, 01:55
2 Jan 09, 00:56
သားထူး: ရောက်လာပါ၏ မပန် မင်္ဂလာပါဗျာ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ်နော့
2 Jan 09, 00:24
ဖြိုးငယ်: Happy New Year ပါ .. ပျော်ရွှင်ပါစေ .. ရေးချင်တာရေးပါ .. အားပေးနေမှာပါ ..
1 Jan 09, 23:14
ဟန်သစ်ငြိမ်: hApPy NeW yEaR ပါဗျို့...